Ny robot AI vaovao dia manampy ny mpandeha hahita toerana fialan-tsasatra farany
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny robot AI vaovao dia manampy ny mpandeha hahita toerana fialan-tsasatra farany
Araka ny fanadihadiana nataon'ny Expedia Media Solutions - mety ho mpandeha an-tany, zahao amin'ny tranokala 38 alohan'ny hamandrihana ny toerana onenan'izy ireo. Ity endri-javatra vaovao el ity dia mikendry ny hampihena ny isan'ny tranokalan'ny olona (ho an'ny aingam-panahy) alohan'ny hamandrihana. Arak'izany, fampitomboana ny fahafaha-mandeha ho an'ny mpandeha, ary ny fihenan'ny fihenjanana amin'ny fitadiavana toerana fialan-tsasatra amin'ny minitra farany.
Na eo antenatenan'ny fahavaratra aza dia be dia be ny fotoana mety hivezivezena, fa ny olan'ny olona maro ankehitriny dia ny misafidy ny toerana sy ny fotoana tiany haleha. Miaraka amin'ireo fiasa vaovao - Vivere dia mamela ireo mpitsangatsangana mety hahita ny toerana lavorary ho azy ireo mifototra amin'ny safidiny sy ny fahateren'ny fotoana.
Matteo De Santis, tale jeneralin'ny Vivere.travel, dia nanazava hoe: "Vivere.travel dia zava-niainana hita maso amin'ny ankapobeny. Amin'ny fampiasana ny sehatra an-tserasera, ny mpanjifa dia mampiditra fampahalalana momba ny zavatra mahaliana azy ireo, daty fitsangatsanganana sy teti-bola nomanina, ary mampiseho sary, horonan-tsary ary torolàlana fitsangatsanganana mahafinaritra izahay avy amin'ny toerana itodiana izay mifanaraka amin'ny safidiny manokana. Ny tanjonay dia ny hanampy ny mpanjifa hahita sy hamandrika ireo toerana haleha sy hotely manintona azy ireo indrindra. Rehefa dinihina tokoa, ny sary dia mandoko teny arivo. ”
Raha vantany vao tonga eo amin'ilay tranonkala ilay mpampiasa dia voatosika hiditra amin'ny sasany amin'ireo tiany izy ireo, ny seranam-piaramanidina fiaingana ary ny faharetan'ny sidina.
Ny algorithm AI dia miasa ao aoriana mba hanomezana torolàlana momba ny dia manokana natao manokana ho an'ny tombontsoa manokana sy ny safidin'ny mpampiasa. Avy eo dia hametraka ny toerana itodiana miankina amin'izay sahaza kokoa ho an'io mpampiasa manokana io sy ireo safidiny alohan'izy ireo taloha. Izy io koa dia mampahafantatra ny mpampiasa amin'ny toeran-kaleha vaovao izay mety mbola tsy tao amin'ny radar -n'izy ireo - izay miankina amin'ny tombotsoan'ny mpampiasa ihany koa.
Amin'ny alàlan'ny fampahalalana feno momba ny dia, torolàlana fitetezam-paritra ary sary dia zaran'i Vivere amin'ny mpampiasa ilay toerana ary tereny izy ireo handray fanapahan-kevitra haingana kokoa. Ary koa, amin'ny fidiran'ny mpampiasa bebe kokoa sy ny fampiasana ny algorithm AI, ny sehatra dia mivoatra sy mianatra tsy tapaka ary manaiky ny filàna sy ny filan'ny mpandeha mba hanatsarana ny kalitaon'ny atiny manokana.
Hoy izy namarana: "Manohana ny teknolojia IBM Watson izahay, matoky izahay fa ho afaka hamoaka atiny tsara voarafitra tsara izay manintona ny karazana mpandeha rehetra, ary manova ny fomba kasaina ataon'ny olona sy amin'ny famandrihana ny fialan-tsasatra ho an'ny tsara kokoa.
Ny endri-javatra: Vivere.travel
Recharge any Hong Kong ao amin'ny Hotely Capsule hahazoana torimaso tsara
Dubai - Zagreb dia mitondra an'i Emirates sy flydubai miaraka